Gịnị bụ agwaetiti: njirimara, nhazi na ụdị | Network Meteorology
Mgbe anyị na-ekwu maka ụdị ọdịdị ọdịdị dị iche iche dị ugbu a, anyị na-ahụ na agwaetiti ahụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma site na ndị njem nleta. Na agwaetiti ahụ nwere njirimara pụrụ iche na usoro okike dị mkpa ịmara. Otú ọ dị, ọ bụghị onye ọ bụla maara kpọmkwem gini bu agwaetiti. Ha na-enwe njirimara ala na ọnọdụ ụfọdụ ga-ezute iji mee nke a.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe agwaetiti bụ, ihe e ji mara ya na mbido ya.
1 Gịnị bụ agwaetiti
2 Gịnị bụ agwaetiti: e guzobere
3 Islandsdị agwaetiti
4 Agwaetiti wuru
Agwaetiti bụ ala gbara mmiri gburugburu, nke pere mpe karịa ala. Mgbe ọtụtụ agwaetiti dị nso, a na-akpọkọta ha agwaetiti.
E nwere ụdị agwaetiti dị iche iche dịka ọdịdị ha si dị, na nha na ụdị ha dị iche iche. Ndị kasị ukwuu bụ Greenland, Madagascar, New Guinea, Borneo, Sumatra na Baffin Island, ebe ndị pere mpe dị ọtụtụ karịa karịa n'ihi na ha abụghị naanị ndị agbasasị n'etiti oké osimiri, kamakwa na ọdọ mmiri na ọbụna osimiri. Agwaetiti a na-abụkarị obere ala, ọ na-abụkarị na-enweghị ndụ mmadụ, mana nwere osisi na anụmanụ ndị ọzọ.
A na-akpọ agwaetiti ndị obere ka obere agwaetiti, nke na-abụkarị ndị na-enweghị ụmụ mmadụ, kama ha nwere osisi na anụmanụ. A na-ejikọkarị agwaetiti ndị ahụ echiche nke paradaịs. Ha nwekwara njikọ na owu ọmụma na ịdị adị nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Ha abụrụla ihe dị ezigbo mkpa nye mmadụ. Ọtụtụ n'ime mba bi n'otu agwaetiti ma ọ bụ karịa ma nwee ike ịdị oke mkpa dị ka akụ na ụba Japan. Japan bụ mba etinyere na agwaetiti ụfọdụ nke Oke Osimiri Pasifik ma taa guzobere maka nka na akụnụba ya. Ọganihu teknụzụ nke Japan amalitela n'enweghị nsogbu ọ bụla n'agbanyeghị na mba ahụ emepebeghị agwaetiti.
Iji mara nke ọma ihe agwaetiti bụ, anyị ga-ahụ ọtụtụ ma ọ bụ obere nkọwa nke enyere dị ka Millennium Systems Assessment si dị. Ndị a bụ ala ndị dịpụrụ adịpụ nke mmiri gbara gburugburu, ndị mmadụ bi ma kewaa ya na kọntinent opekata mpe kilomita 2. Nha ya ga-aha nhata ma ọ bụ karịa karịa kilomita 0.15. Ekwesiri iburu n'uche na otutu agwaetiti bu ebe juputara na ndu di iche iche na umu anumanu. Otu umu anumanu di iche iche bu ihe ndi ozo na ndi ozo na enweghi ike idi ebe ozo ebe o choro onodu ndi a ka o wee di ndu. Dịka ọmụmaatụ, lemur bụ anụmanụ a na-ahụ naanị na Madagascar, agwaetiti.
Gịnị bụ agwaetiti: e guzobere
Ozugbo anyị matara ihe agwaetiti bụ, anyị ga-anwa ịkọwa etu ha si malite. Agwaetiti dị adị n'ihi na tectonics efere nke mbara ụwa anyị na-agagharị mgbe niile. Anyị na-echeta na mbara ụwa nwere ọtụtụ igbe nwere ihe dị iche iche. Uwe nke Earthwa nwere oke mmiri nke convection n'ihi ọdịiche dị na njupụta nke ihe nke a na-emekwa ka eriri kọntinent ahụ gbanwee. Nke a jikọrọ ọnụ mejupụtara tectonic efere ma na-asọgharị ha oge niile.
Agwaetiti ndị ahụ jikwa efere tectonic na-agagharị. Mgbe ụfọdụ ha na-agbakọta ọnụ na oge ndị ọzọ ha na-ekewa. Ya mere, ha nwere ike ịpụta ihe karịrị ọtụtụ nde afọ n'ihi ihe ndị dị na mbara igwe dịka mgbawa ugwu nke ugwu mgbawa. E nwere ọtụtụ ụzọ a ga-esi nwee ike ịmepụta agwaetiti ma site na nke a tinye ha n'ụdị dị iche iche.
E nwere ụdị agwaetiti dị iche iche dịka njirimara ha si dị. E kewara agwaetiti ndị a ụzọ abụọ abụọ bụ kọntinent na oke osimiri. Ka anyị lee ihe e ji mara onye nke ọ bụla n’ime ha:
Agwaetiti dị iche iche: Ha dị na shelf ụwa. Ọtụtụ n'ime ha bụ akụkụ nke kọntinent ahụ, mana ha dịpụrụ adịpụ mgbe ịrị elu oke osimiri. Typedị a bụ nke a na-akpọ "agwaetiti", nke na - eme mgbe oke mmiri na - ekpuchi akụkụ nke ala na - ejikọ otu mpaghara na mpaghara ọzọ. Ya mere, akụkụ ya nke mmiri gbara gburugburu. Agwaetiti ndị nwere ihe mgbochi nwere akụkụ ala dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri, ọtụtụ n'ime ha bụ akụkụ nke shelf mpaghara. Ha nwere ike ịbụ nsonaazụ nke ebili mmiri na-eme ka ájá na ájá, ma ọ bụ ọbụna ihe ndị na-agbaze n'oge ice ikpeazụ mere ka ịrị elu mmiri. Ihe atụ nke ụdị agwaetiti ndị a bụ Greenland na Madagascar.
Agwaetiti Oceanic: Ha abụghị akụkụ nke shelf ụwa. A na-akpọkwa ụfọdụ agwaetiti mgbawa n'ihi na ọ bụ ụdị mmiri ọ bụla na-agbọpụta ọkụ na-akpụ ha. Agwaetiti ndị dị n’oké osimiri na-adịkarị na mpaghara subduction ebe otu efere na-agbadata n’okpuru nke ọzọ, ọ bụ ezie na ha nwekwara ike ịmalite ebe ọkụ. N'okwu a, efere ahụ na-agagharị n'elu ebe ahụ, ka magma na-aga elu, na-eme ka eriri ụwa gbagoo.
Agwaetiti ndị ọzọ dị n'oké osimiri malitere na mmegharị nke efere tectonic ka ha na-arịgo n'elu oke osimiri. Mgbe ụfọdụ nnukwu ìgwè coral na-etolite nnukwu coral. Mgbe okpukpo calcium nke anụmanụ ndị a (nke mejupụtara karịsịa calcium carbonate) na-atụkọta nke ukwuu nke na ha dị elu karịa oke osimiri, ha na-etolite agwaetiti coral. N'ezie, a na-agbakwunye ihe ndị ọzọ na ọkpụkpụ.
Ọ bụrụ na ọkpụkpụ na-agbakọta gburugburu agwaetiti oke osimiri (ọ na-abụkarị ugwu mgbawa), oge na-aga, ala dị n'etiti na-emikpu ma kpuchie ya na mmiri iji mepụta ọdọ mmiri, nsonaazụ ya bụ atoll. Otu ihe atụ nke ụdị agwaetiti a bụ Hawaiian Islands na Maldives.
Mmadu ejisiri mepụta agwaetiti aka na teknụzụ ọgbara ọhụrụ. Ihe eji eme ihe eji eme ihe na ciment nwere ike buru ihe omuma nke ihe ndi ozo. Otú ọ dị, ihe dị mkpa nke agwaetiti agaghị adị otu ọ bụrụgodi na mmadụ na-agba mbọ i imitateomi ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, agwaetiti ndị ahụ na-adọrọ nnọọ mmasị site na mbara ala na usoro ndu. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu ihe agwaetiti bụ na ihe njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Gịnị bụ agwaetiti